China Indoor Fitness Equipment Yakazara Muviri Workout Magnetic Kukwasva Mashini foldable Kukwasva Murovedzi Nyore yeKuchengetedza Mugadziri uye Mutengesi | Bestgym
Bhizimusi Mhepo Bhasikoro
Elliptical Muchinjikwa Mudzidzisi
Magnetic Yakarurama Bike
Yakagadziriswa Exercise Bike
Rower Kudzidzisa Muchina
Hot kutengesa kwakanyanya mutengo mutengo ...
Steel furemu chigaro Recumbent ...
China Fekitori Mutengo kusimba ...
Yakapetwa Musha Kudzidzira Wo ...
Indoor Fitness Equipment Yakazara Muviri Workout Magnetic Kukwasva Muchina unopetwa Kukwasva Mudzidzisi Nyore Kuchengeta
Magnetic, 8 makakatanwa anochinja
Fitness Center, kirabhu, Kumba uye zvichingodaro.
Max. Kuisa ::
GS, EN957, ROHS, CE… nezvimwewo.
10000 Set / Sets pamwedzi
Kavha & Dhirivhari
1SET / RAKADZIDZWA katoni
Lead Nguva :
Uwandu (Sets) 1 - 1 2 - 100 101 - 200 > 200
Est. Nguva (mazuva) 7 20 25 Kutaurirana
Adjustable 8 pamwero kuramba
Mberi mubato bhaa
Chigaro chinotsigira positi
Max mushandisi uremu
NW / GW
26kg / 31kg
910X280X620mm / 1240X110X100mm
20'FT / 40'HQ: 180/400 sets
Maawa makumi maviri nemaviri epamhepo sevhisi / anopfuura makore manomwe
Yechitatu bato kuongorora, senge SGS, BV, TUV… nezvimwe. zvinogamuchirwa
Dzidzira mabhasikoro anoshandiswa pakurovedza muviri, kuwedzera kugwinya, kuonda, uye kudzidzisa zviitiko zvezviitiko. Iyo yekurovedza bhasikoro yakagara ichishandiswa pakurapa kwemuviri nekuda kweiyo yakaderera-maitiro, akachengeteka, uye anoshanda epamoyo kurovedza kwaanopa.
Rovedza muviri emabhasikoro ndeimwe yeanonyanyo kufarirwa cardio-michina kuve nayo kumba uye inopa akawanda hutano uye kugwinya mabhenefiti senge kurasikirwa uremu, toning nekusimbisa. …
Chinokosha pakurema uremu ndechokupisa macalorie akawanda kupfuura aunoshandisa, saka kana iwe ukavavarira kupisa macalorie mazana mashanu pazuva, ucharasikirwa nepondo imwe yemafuta pasvondo.
Ningbo Bestgym Fitness Equipment Co,. Ltd.iri mumahombekombe uye traffic nyore guta-Fenghua Ningbo, iyo inofukidza 30000 mativi metres.
Inobatanidza R & D, kugadzira, kushambadzira, sevhisi kune imwe, uye iri nyanzvi hombe yezvigadzirwa zvehutano kambani. Isu tauya neboka revanyanzvi, tamisa timu yekusika uye yakanaka yeR & D ine ruzivo, yekugadzira uye yekutengesa vanhu.
Isu tine epamberi gungano mutsara zvivakwa, zvepamusoro uye zvakangwara kugadzira uye kuyedza zvigadzirwa. Isu tinoita yakazara yakazara yakazara yeanoshanda mhando kutonga system; tevera zvazvino uno zvigadzirwa zvetekinoroji.
Isu tinopa inonzwika sevhisi sisitimu, shingairira kugona & kugona, uye kuyedza kusangana nezvinodiwa nevatengi.
95% yedu yekuzvigadzira yakaburitswa, misika mikuru inovhara America, Europe, South America, Asia..etc.
Mushure mekutengesa sevhisi
l Bestgym inopa masevhisi uye rutsigiro rwaunoda padanho rega rekushandira pamwe kwedu. Isu tiri vashandi vebhizinesi vaunogona kuvimba navo; unogona kuzorora woenderera mberi nekuita bhizinesi.
l Kune chero dambudziko, ndokumbirawo utaure nesu chero nguva yako yakakodzera, tinokupindura pakutanga kwedu kutanga mukati maawa makumi maviri nemana
l Maindasitiri ruzivo pamusoro pemakore manomwe.
l Kutumirwa kwezvinhu -Mapfuura nyika gumi neshanu pasirese.
l Iyo yakanyanya nyore kutakura uye nekukurumidza kutumira.
l Yemakwikwi mutengo neakanakisa sevhisi.
l Yakakwira tekinoroji yekugadzira tambo ine yepamusoro mhando zvigadzirwa.
l Yakakwirira mukurumbira yakavakirwa pane akanakisa zvigadzirwa.
Bhokisi reBrown kurongedza / sekutakura kwemutengi kurongedza
40 mazuva mushure mekugamuchira dhipoziti
Chitupa (ISO9001, GS, EN957, ROHS, CE)
Iwe uri kambani yekutengesa kana inogadzira?
Ndeipi yako nguva yekuendesa?
Mazuva makumi matatu nemakumi mana kusvika makumi mana mushure mekugashirwa
Unogamuchira sevhisi yeOEM?
chii chako dhirivhari mazwi?
FOB/ CFR /CIF
Ndeapi mazwi Ekubhadhara?
30% sedhipoziti, 70% isati yatumirwa naT / T.
Western Union inogamuchirwa nemari shoma.
L / C inogamuchirwa nemari yakawanda.
Scrow, Paybal, Alipay zvakare zvakanaka
Sarudzo inoitika nekuda kwemhando, ipapo mutengo, Tinogona kukupa zvese zviri zviviri.
Pamusoro pezvo, isu tinogona zvakare kupa nyanzvi zvigadzirwa kubvunza, zvigadzirwa ruzivo chitima (chevamiriri), yakatsetseka zvinhu kuendesa, yakanakisa mutengi mhinduro zvirevo.
Chii chiteshi chako chinowanikwa cheTumirwa?
Ningbo Chiteshi, China
Ndeapi masevhisi ako anoratidzwa?
Yedu fomura yebasa: mhando yakanaka + yakanaka mutengo + sevhisi yakanaka = kuvimba kwevatengi
Musika wako uripi?
Kufukidza nyika dzinopfuura makumi maviri pasi
(America, Germany, Spain, Austria, Portugal, Australia, Poland, Japan… nezvimwewo.)
Pashure: Imba shandisa magnetic recumbent bhasikoro nemutengo wakanaka
Musha Shandisa Recumbent Bhasikoro Kugara Recumbent St ...
Imba Fitness Zvigadzirwa Exercise Yakarurama Bhasikoro mu ...
Kupisa kutengesa mumba zvine simba zvakapetwa multifunction ...
Commercial Kuparadza Air Bike Gymnasium Exercise ...
Wholesale zvigadzirwa customized kumba yokurovedza muviri kuruka bod ...
Indoor Kuchova Bike ne Tafura Ekubata Exercise ...
Zhangjia Industrial Zone, Shangtian Town, Fenghua, Ningbo, China
Email:kendra @ bestgymfitness. com
Rova pinda kutsvaga kana ESC kuti uvhare